ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စစ်တွေ - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စစ်တွေ - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၏ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ၄.၈၆၄ ဧက ..
ထို့အပြင်အရောင်တန်းများချီတက်ခြင်းအဖြစ်လူသိမျာသည့် ထိုင်းတော်ဝင်စောင့်ချီတက်ပွဲသည်, ၏မွေးနေ့၏အခမ်းအနားအတွက် 1953 ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်းဒီဇင်ဘာလ၂ရက်ဖြစ်ပေါ် ထိုင်းဘုရင် ဟာရာကာလအတွင်း ဘုရင့်စောင့်တပ်ဖွဲ့ ၏ တော်ဝင်ထိုင်းတပ်မတော်နေ့ တစ်လုပ်ဆောင် စစ်ရေးချီတက်ပွဲ နှင့်ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုသစ္စာရှိမှု ကရာဇ်မင်း။ နေရာသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်ရှိ တော်ဝင်ပလာဇာ ဖြစ်ပြီး Dusit နန်းတော် နှင့် Ananta Samakhom Throne Hall ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၏ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ၄.၈၆၄ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်စစ်တွေကို ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း စစ်တွေရုံးတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် ယခုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်စစ်တွေကို တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စစ်တွေမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စစ်တွေမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။